Goatemala: Tsy mampitombina ny sasany ireo sary mahery vaika ahitana ireo namoy ny ainy tamin’ny ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2019 3:57 GMT
Ny fakana sary amin'ny sarimihetsika dia fomba iray ahafahana miantoka fa tsy manadino ny tantaran'ny firenena iray ny fahatsiarovam-bahoaka. Rehefa ahitana hetsika mahatsiravina izany tantaran'ny firenena izany, dia mety ho lasa fampahatsiahivana ny lasa mahery vaika sady tsy mampitombina ireo sary ireo. Tao Guatemala, mpaka sary maromaro no nandray anjara tamin'ny fandraketana sy fanehoana ireo sary avy amin'ny ady mitam-piadiana izay nitranga nandritra ny 36 taona.
Bilaogera Aly ao amin'ny bilaogy iombonana Dorsumi [es] manoratra momba ny mpaka sary Frantsay iray izay namoaka boky antsoina hoe “La verdad bajo la tierra Guatemala, el genocidio silenciado” (Ny marina nalevina. Goatemala, ilay fandripaham-bahoaka nafenina).
Nasaina hampiranty ny sariny tao amin'ny Palais des Nations ilay mpaka sary Goatemalteka Daniel Hernández-Salazar, Jereo ny United Nations Organization any Geneva, Soisa. Mampiseho amin'ny endrika ara-java-kanto sy an'ohatra ny horohoro navelan'ny ady an-trano izay nandravarava ny firenena Amerika Afovoany nandritra ny 30 taona mahery ny sarin'i Hernandez. Iray amin'ireo tanjony ny hitahiry ny fahatsiarovana matetika manjavona mikasika ny hetsika toy izany, mba hisorohana ny fiverenany. Ao Goatemala, fantatro fa maro ireo olona ho faly ny hanadino ny zava-drehetra nitranga. Na izany aza, manam-pironana ny hahatsiaro ny tantara, tahaka ilay olo-malaza Borges Funes el Memorioso.
Hajia-tsary avy amin'i James Rodríguez, nahazoana alalana
Fanampiny: Raha hijery ireo sarin'i Daniel Hernández’ nesorina tao Genève, dia tsidiho ity tranonkala ity.